Xabad joojin la kala dhex dhigay dhinacyada ku dagaalantay Guriceel | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Xabad joojin la kala dhex dhigay dhinacyada ku dagaalantay Guriceel
Xabad joojin la kala dhex dhigay dhinacyada ku dagaalantay Guriceel
Wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dhinacyada dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay uu dagaalku u dhexeeyay ay oggolaadeen in ay wadahadlaan kadib markii degmada Guriceel ay gaareen guddi dhexdhexaadinaya labada dhinac.
Guddigan oo tiradoodu gaareyso illaa 32 ruux ayaa waxaa ay ka mid ahaayeen odayaashii iyo siyaasiyiintii ka qeybgalaysay shirka ka dhacaya magaalada Dhuusomareeb.
Guddoomiyaha guddiggan Guriceel Maxamed Axmed Caalim Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug ayaa sheegay in maanta ay la kulmeen labadii garab ee ku dagaalamay magaalada Guriceel isla markaana ay ka codsadeen in ay xabadda joojiyaan ayna wadahadlaan labada dhinac si colaada loo soo afjaro taasina ay ka ogolaadeen.
Xaalada degmada Guriceel ayaa degen caawa iyadoo xaalada magaaladana ay caadi ku soo noqonayso inkastoo weli ay jirto cabsi inay dagaalada soo noqdaan.
Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud oo maalmihii u dambeeyay waxaa ka jiray dagaal ay isaga soo horjeedeen ciidamo taabacsan Ahlu Sunna iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, dagaalkan ayaa geystey qasaare isugu jira dhimasho,dhaawac iyo barakac